Khayre oo Golihiisa Wasiirda ka mamnuucey isticmaalka Baraha Bulshada
Khayre oo Golihiisa Wasiirada ka mamnuucey isticmaalka Baraha Bulshada [AKHRI]
MUQDISHU- Ra'isalwasaaraha dowlada Federaalka Somaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa Golihiisa Wasiirada ka mamnuucay inay baraha bulshada, idaacadaha iyo TVyada uga hadlaan warar siyaasadaysan, xaalada taagan iyo wixii xasaasi ah illaa inay ogolaansho ka haystaan Xafiiska Ra'isalwasaaraha maahane.
Wasiirada waxaa lagu wargeliyay inaysan uga hadli karin baraha bulshada wixii xasaasi ah ama siyaasad ah ogolaansho la'aan. Amarka Wasiirada looga mamnuucay baraha bulshada waxaa uu kasoo baxay Xafiiska Ra'isalwasaaraha waxaana ogeysiin la siiyey Madaxweynaha, warqadase waxaa ku saxiixan Ra'isalwasaare ku xigeen Mahad Guleed.
Amarka Khayre ayaa yimid kadib markii ciidamada amaanka dowlada Federaalka la sheegey in degaanada Bariire ku dileen dad shacabka ah kadib xubno ka tirsan golaha wasiirada xoggo kala duwan ku qoreen Baraha Bulshada.
Dowlada Madaxweyne Farmaajo ayaa tan iyo intii xilka qabatey ayaa howlwadeenadeeda ahaayeen kuwo aad u isticmala Baraha Bulshada.
Wasiirka arimaha dibada Somaaliya Yuusuf Garaad Cumar, ayaa noqdey shaqsiga ugu isticmaalka badan Baraha bulshada isagoo mar walba kaga hadlay arimaha siyaasada iyo howl-maalmeedkiisa kale.
Xukuumadda ay dhaleecayn xooggan kala kulantay Bulshada, kadib markii Wasiirada Gaashaandhigga iyo Warfaafinta ku qoreen Baraha Bulshada in weerarkii Bariire lagu dilay rag katirsan Al shabaab, iyadoo Madaxweynaha dalkana uu qiray in shacab lagu dilay, kana tacsiyadeeyay.
Kala hadalka iyo kala warqab la'aanta Madaxda sare ee dowladda Federaalka Somalia, ayaa Jahwareerisay shacabka iyo Beesha Caalamka, oo meel ay u raacaan garan waayay hadallada iska soo horjeeda ee kasoo baxa dowladda.
Isticmaalka Baraha Bulshada oo aan ka fiirsasho laheyn, waxay keentay inay hoos u dhacdo Kalsoonidii shacabka ay u hayeen dowladda Federaalka, oo aan laheyn Siyaasad midaysan oo dhanka Warbaahinta ah.
Halkaan ka akhri qoraalka kasoo baxay xafiiska Ra'isal wasaraha Somaaliya.
Wasaaradda Amniga oo amarro kusoo rogtay hoteelada Puntland [AKHRI]
Puntland 09.09.2017. 22:50
GAROWE, Puntland- Amar kasoo baxay wasaaradda amniga Puntland ayaa lagu mamnuucay in shirar lagu qabsado hoteellada iyo meherada ku yaalla magaalooyinka Puntland.
Warqad kasoo baxday xafiiska wasiirka amniga Puntland oo ay wax ka ogtahay Madaxtooyada ayaa loogu go ...